﻿ बराहक्षेत्रका मेयरको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट वडाध्यक्षले गरे नगरसभा बहिष्कार
बराहक्षेत्रका मेयरको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट वडाध्यक्षले गरे नगरसभा बहिष्कार
बुधबार १०, असार २०७७
बराहक्षेत्र । बराहक्षेत्र नगरपालिका ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष राजु अधिकारीले छैटौ नगरसभा बहिष्कार गरेका छन् । मेयर निलम खनालकै पार्टी नेकपाका तर्फबाट वडाध्यक्ष जितेका अधिकारीले बहिष्कार गरेका हुन् ।
मेयर खनालले नजिकका मान्छेलाई बजेट दिने गरेको, वडाहरुमा समानुपातिक बजेटको निकासा नगरेको, उनको घर धाएर चाकडी गर्नेलाई बजेट दिने गरेको भन्दै नगरसभा बहिष्कार गरेको अधिकारीले बताएका छन् । उनले पार्टी तथा नगरसम्बन्धि असन्तुष्टी रहेको बताए ।
मेयर खनाल व्यक्ति हावि भएको र आफ्नो क्षेत्रको मात्र विकास गर्ने गरी रकम छुट्याएको आरोप लगाए । नगरपालिकाका वडाहरुको जनसंख्या, भौगोलिक अबस्थाको अध्ययन गरेर बजेटको नीति तथा कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पार्टीले नगरपालिका चलाउने भएकोले आफ्नो कुरा पार्टीमा राख्ने र सुनुवाइ भएन भने राजिनामा दिने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मेयरले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई नदेखेको तर किन नआएको थाहा नपाएको बताए । आधिकारीक थाहा नभएको बताए । उनले बहिष्कार एक जनाले गरेर नहुने बरु असहमती मात्र हुने बताए । वडा सदस्यहरु सबै आएको बेलामा र प्रतिपक्षीलेसमेत राम्रो भनेर भनेको बजेटमा एउटै पार्टीका वडाध्यक्षको असहमतीबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
बडा अध्यक्ष ज्यु एउटै पार्टिकै भए नि अडान भने राम्रै लिनु भएछ क्यार! म पनि पार्टिगत हिसाब ले ने क पा पक्षधर नै हु तर पार्टिका नगर स्तरिय नेताहरुको चाल ढाल हेर्दा र बुझ्दा चित्त बुझ्दो लाग्दैन। कहि कतै गुन्द्रुक कै झोल मा बिक्ने जस्तो पनि लाग्छ। नगर को बजेट हाल बिकास मुखी त देखियो तर दिगो बिकास मुखी देखिएन , बेरोजगारी युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउने बजेट देखिएन ! कोरोना भाईरस सङ लड्ने बजेट देखिएन ,! बराहक्षेत्र नगर बाढीले अछुत नरहने नगरमा बिपत ब्यवस्थापन सम्बन्धी दिर्घकालिन योजना अघि सारिएको देखिएन। जलस्रोत को धनी देश नेपाल अनि त्यही नेपाल को ठूलो नदि सप्तकोशी बराहक्षेत्र नगरपालिका सङै गासिएको हुदा पनि ब्यर्थै बगेका पानीको सदुपयोग गर्न जानिनौ।।। नगर प्रमुख महोदय बजेट आए पछि योजना बनाउन र लेखा जोखा गर्न कि मलाई डाक्नु होस कि तपाईहरुले दिगो बिकास गर्नुस , बेरोजगारिलाई जरा देखिनै उखेलेर फाल्नुस। धन्यवाद
बिर्तामोड खोप प्रकरणः बिर्तामोड नगरपालिकामा तालाबन्दी
भारतबाट पाँच बालकको उद्धार